Waa Sidee Xaaladda Baladweyne? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa Sidee Xaaladda Baladweyne?
Inta badan shacabka Baladweyne, ayaa ka soo horjeeda Maamulka Hirshabeelle iyo guud ahaan nidaamka Guudlaawe, ee Madaxtooyada Soomaaliya sida boobka ah u geysay Jowhar.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Xaaladda Magaalada Baladweyne ayaa saaka deggan, kadib kacdoon shacab iyo gadood ciidan oo is garab socda oo xalay ka dhacay magaalo madaxda gobolka Hiiraaan.
Ciidamo la magac baxay “Badbaadada Gobalka Hiiraan” oo ka tirsan CXDS ee ku sugan Hiiraan, ayaaa xalay la wareegay gacan ku heynta magaalada Baladweyne, waxaana xigay isku soo baxyo waaweyn, oo lagu taageerayay tallaabada ay qaadeen ciidanka gadoodsan.
Xaaladda guud ayaa saaka la soo warinayaa in ay tahay mid deggan, waxaana dhanka kacdoonka ku biiray inta badan maamulkii Gobolka Hiiraan, waxaana xilka Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan ee dowlad Goboleedka Hirshabeelle, iska casilay Cabdi Muumin Cilmi Iidow.
Sababaha uu xilka isaga casilay wuxuu ku sheegay, kadib markii uu ogaaday in qaar ka mid ah siyaaasiyiinta ka socoda Hirshabeelle, ee jooga Baladweyne ay qorsheynayaan, dilka Ugaas Yusuf Ugaas Hassan Ugaas Khalif iyo Nabadon Cilmi Hagar Guure oo kamid ah Nabadoonada Gobolka Hiiraan.